Warbixin ku saabsan Doonidii ku degtay Badda Mediterranean ee ay ku dhinteen Dhalinyaro Soomaali ah – STAR FM SOMALIA
Doonida ayaa ku qalibmatay xilli habeen ah bartamaha badda cad ee dhexe (The Mediterranean Sea).
Dadkani tahriibka ah ayaa ka soo ambabaxay xeebaha dalka Masar dabayaaqadii todobaadkii hore oo ku beegneed maalmaha Khamiis iyo Jimce .
Waxaa la badbaadiyay tiro dad ah oo isku dayay inay ka tallaabaan badda cad ee dhexe (The Mediterranean Sea) , kuwaasi oo ka soo socdaalay xeebta Magaalada Alexandria ee dalka Masar , waxa ayna ku sii jeedeen xeebaha dalka Talyaaniga.
Meydadka illaa iyo lix ruux ayaa si gaar gaar ah looga kala helay gelinkii dambe ee maanta xeebaha Libya .
Dadka la badbaadiyay ayaa waxaa gacanta loo geliyay maamulka Magaalada Kalamata oo ah magaalada labaad ee ugu dad badan Jaziirad u ekaha Peloponnese ee koonfurta Greece .
Dadka la badbaadiyay oo tiradoodu gaareyso 41 ruux ayaa Booliska Greece ay hooy uga dhigeen garoon kubadda cagta ah oo ku yaala Magaalada Kalamata.
Doonida Cinjirka aheyd ee ka soo baxday Masar waxaa saarnaa 300 ruux , halka doonida alwaaxa ka sameysan ee ka soo dhaqaaqday Libya ay saarnaayeen 240 ruux , kuwaasi oo ka soo ambabaxay Magaalada Tobruk , waxa ayna doonidu qalibmatay xilli saq dhexe habeennimo markii la isku dayay in dadkii Masar laga soo daabulay la saaro doonida weyn .
Dadka la badbaadiyay ayaa kala ah 37 ruux oo rag ah, 3 haween iyo canug yar , waxa ayna dadkan iskugu jiraan Soomaali , Ethiopian , Sudanese iyo Masaari , waxaana lagu soo badbaadiyay markab raashiin xamuul ah siday.
Cawaale Warsame Sandhool oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday Doonidii ku degtay badda cad ee dhexe (The Mediterranean Sea) , kana soo socdaalay xeebta Magaalada Alexandria ee dalka Masar, ayaa sheegay in muddo shan cisho ah inay badda dusheeda dul sabeynayeen.
Cawaale isaga iyo dhowr qofood oo Soomaali ah ayaa hadda ku sugan Magaalada Kalamata oo ah magaalada labaad ee ugu dad badan Jaziirad u ekaha Peloponnese ee koonfurta Greece .
Isagoo sheekeynayay waxa dhacay ayuu tilmaamay in doonida ay ka soo raaceen Magaalada Alexandria ee dalka Masar,ay saarnaayeen dad gaaraya 500 oo ruux, ayna ka badbaadeen oo qura 23 qof oo uu isaga ku jiro.
Markii ay doonida rogmatay ayuu sheegay Cawaale in shan maalmood badda ay ku dhex jireen oo aysan helin gurmad, halka dadka intooda kale ay ku maashoodeen badda.
Markab laga leeyahay dalka Philippine, ayuu sheegay inay gurmad ka heleen oo lagu badbaadiyay.
“Waxaan kasoo baxnay 7-dii bishan April maalin khamiis ah dalka Masar gaar ahaan magaalada Alxandira, waxaan ahayn 500 qof , doontii ayaa nala qalibantay, waxaan kusoo badbaadnay kaliya 23 qof, waxay doonta nala qallibantay 12-kii bishan, waxaana 17-ka bisha na soo badbaadiyey markab Philippine ah markii aan 5 maalin badda dulsabeynaynay, waxaan ku sugannahay Jasiirad ku taalla Gariiga.” Ayuu yiri Cawaale Warsame Sandhool .
Dadkan la badbaadiyay ayaa bilowgii hore diiday inay isku dhiibaan ciidamada ilaalada badda ee Giriiga , waxa ayna ku adkeysanayeen in la gaarsiiyo Talyaaniga.